Kooxdii Shilka Ku Madhatay Oo Ciyaartooyo Loo Ururinayo
HomeWararka MaantaKooxdii Shilka Ku Madhatay Oo Ciyaartooyo Loo Ururinayo
Saddex koodood oo ka mid ah naadiyada waaweyn ee Brazil ayaa ku yaboohay ciyaartooyo ay ku caawinayaan kooxda Chapecoense oo dhamaan ciyaartoygoodii iyo madaxdii kooxduba ku dhimatay diyaarad kula dhacday duleedka magaalada Medellin ee waddanka Colombia.
Naadiyada Flamengo, Palmeiras iyo Sao Paulo ayaa shaaciyey in ay diyaariyeen ciyaartooyo ay siinayaan kooxda madhatay, si dib loogu dhiso oo ay usii jirto.
Sao Paulo oo lix jeer ku guuleysatay horyaalka waddanka Brazil, ayaa waxay sheegtay in Chapecoense ay tahay in lagu ilaaliyo inay ka ciyaarto heerka labaad saddexda sannadood ee soo socda, si suurtogal u noqoto in ay dib u dhisanto.
Saddex ciyaaryahan oo ka badbaaday shilka, ayaa waxa ay kala yihiin Alan Ruschel oo difaaca uga ciyaari jiray, laakiin uu dhaawac culus ka gaadhay xangullaha, taas daraadeedna rajo dambe oo ciyaareed aanu lahayn. Ninka labaad, waa Helio Zemper oo isaguna difaaca ka ciyaara, waxaase uu burbur ka gaadhay shafka iyo meelo badan oo kale oo jidhka ah oo uu ka jabay. Goolhayihii labaad ee kooxda oo lagu magacaabo Jakson Follman, ayaa isagana lug laga jaray.
Warbaahinta FOX Sports Latin America ayaa waxa ay iyaduna shaacisay in lix ka mid ah wariyeyaasheedu ay ku geeriyoodeen shilka dhacay.
Shilkan oo kale ayaa waxa uu ku dhacay Manchester United sannadkii 1958-kii, laakiin may wada madhanin ciyaartoygeedu, kooxaha Liverpool iyo Nottingham Forest ayaana ku caawiyey ciyaartooyo amaah ah oo u ciyaari jiray intay ka maarmaysay.
Dani Alves: Barcelona Way U Baahnayd Ciyaartoy Waalan Sida Turan
11/08/2015 Abdiwahab Ahmed
Manchester City 2-1 West Ham – All Goals & Highlights
Lucio Oo Qirtay Inuu Khalad Sameeyey Markii Uu Ka Tegay Inter Milan Ee Uu Ku Biiray Juventus
15/12/2017 Abdiwahab Ahmed